नेपाली भएर पनि नागरिता पाएन ! – NEWS24 TV – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
नेपाली भएर पनि नागरिता पाएन ! – NEWS24 TV
उनि सन्जय राई । उनको यो नाम कसले राखीदियो उनलाई थाहा छैन । उनका बाबु आमा को हुन, उनी कहाँ जन्मिए केही ठेगान छैन । उनि होस सम्हालेपछि आफुलाई काठमाण्डौँ बल्खुको फुटपाथमा सम्झिन्छन् । त्यतीबेला डेन्ड्राइड्स खाएर बाटोमै सुत्थे सन्जय । उनको दैनिकी नियाली रहेको बल्खुमा रेष्टुरेण्ट चलाइरहेको शंकर बस्नेतको मनमा माया पलायो । आफ्नो पसलमा खाने कुरा माग्न आउने सन्जयलाई आफ्नै पसलमा राखे, नुहाएर सरसफाई गरि नयां लुगा लगाएपछि । सन्जयले आफ्नो बाबुआमा शंकरलाई मान्न थाले,यो परीवारका सन्ताना सरह भने । उनि केही समय बिद्यालय पनि भर्ना भए । तेक्वान्डोको बल्याक बेल्ट खेलाडी समेत हुन । अहिले बिहान साँझ बिद्यालयमा बिद्यार्थीहरुलाई तेक्वान्डो सिकाउँछन्, दिउसो सिनामंगलमा काम गर्छन् । अहिले उनी २२ बर्षका भए । तर आफ्नो नामबाट मोवाईलको सिम समेत किन्न पाउँदैनन सन्जय । कारण यो समाजले उनलाई अनाथको संग्या दिएको छ र नेपाल सरकार उनलाई अनाथ बनाएको छ । उनले बाबु आमा नचिनेकै कारण अहिले सम्म नागरीकता पाएका छैनन् ।